निर्माण व्यवसायी सिलवाल भन्छन्, निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ-Setoghar
अनिल सिलबाल प्रबन्ध निर्देशक जय विष्णु निर्माण सेवा
अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका आयोजनाहरु अघी बढाउने क्रममा टेण्डर निकालेर व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्ने काम गर्छ । यद्यपि त्यसरी टेण्डर निकालेर अघी बढाउने आयोजनाहरु प्राविधिक तथा वातावरणीय हिसाबले कत्तिको उपयुक्त हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा भने अध्ययन भएको छैन । कुनै आयोजना अघी बढाउने क्रममा त्यस क्षेत्रमा रहेका अन्य भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक चीजहरु खालि गराउने कार्य पहिले नै हुनुपर्ने हो, तर अहिले सम्म यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन ।
नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति अहिले हामी व्यवसायीहरुलाई त्यति सहज वातावरण छैन । विभिन्न किसिमका बाधाव्यवधानहरु बीच हामीले यस व्यवसायमा रहेर काम गरिरहेका छौं । राज्यका नीतिहरु समेत निजी क्षेत्रमैत्री बन्न सकेका छैनन् । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा हामी व्यवसायीहरुलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरु सृजना ग्रिएको छ । निर्माण व्यवसायमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको निम्ति नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाको हिसाबले समेत विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पछिल्लो १ बर्षको अवधिमा नै हाम्रो यस व्यवसायमा रहेका व्यवसायीहरुको हक, हित र अधिकारको निम्ति काम गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ज्यूको हत्या भयो । जुन निकै दुखद कुरा हो । अन्य निर्माण व्यवसायीहरु पनि निकै जोखिमको बीच यस व्यवसायमा रहेर काम गर्नुपरेकाे छ ।
बिना अध्ययन टेण्डर निकाल्दा समस्या
अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका आयोजनाहरु अघी बढाउने क्रममा टेण्डर निकालेर व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्ने काम गर्छ । यद्यपि त्यसरी टेण्डर निकालेर अघी बढाउने आयोजनाहरु प्राविधिक तथा वातावरणीय हिसाबले कत्तिको उपयुक्त हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा भने अध्ययन भएको छैन । कुनै आयोजना अघी बढाउने क्रममा त्यस क्षेत्रमा रहेका अन्य भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक चीजहरु खालि गराउने कार्य पहिले नै हुनुपर्ने हो, तर अहिले सम्म यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन । पानी, बिजुली, घर, रुख, लगायतका विभिन्न वस्तुहरु हाम्रो लागि समस्याको रुपमा नै रहँदै आएका छन् । कुन ठाऊँमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने हो भने कम लागतमा छोटो समयमा सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पहिले कुनै अध्ययन नहुने भएको कारण यसबाट हामी निर्माण व्यवसायीहरु निकै नै समस्यामा पर्दै आएका छौं । वास्तवमा यस्ता आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरु पहिले नै नेपाल सरकारले समाधान गरिदिने वा सोही बमोजिम काम अघी बढाउन सकिने वातावरण निर्माण गरिदिने हो भने हामी निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मेवारी लिएको काम गुणस्तरीय तवरले समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहने थियो, तर अहिले यो अवस्था छैन । वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा पनि यस किसिमका समस्याहरु समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले कुनै पनि चासो लिन नसक्नु निकै दुखद कुरा हो । तर यसको जिम्मेवारी लिन राज्य पक्ष तयार छैन, दोष व्यवसायी माथि मात्रै लगाईन्छ ।
अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक
नेपालमा निर्माण क्षेत्रको सम्भावना निकै राम्रो छ । यद्यपि अहिले सम्म यहाँ जुन मात्रामा ठूला कामहरु अघी बढाउनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । नेपालमा निर्माण व्यवसायमा अत्याधुनिक प्रविधिहरुको अहिले सम्म उपयोग गर्न सकिएको अवस्था पनि छैन । अहिले विश्व बजारमा जुन किसिमका प्रविधिहरु विकास भएका छन्, ती प्रविधिहरु नेपालमा हामीले भित्र्याउन सक्ने हो भने नेपालमा निकै नै राम्रो तवरले छोटो अवधिमा नै निर्माण कार्य मार्फत मुलुकको विकासलाई नयाँ उचाईमा लैजान सकिन्छ ।
विदेशमा रहँदा मैले जे सिकेँ
म नेपालबाट अध्ययन पश्चात् करिब ३ बर्ष गल्फ कन्ट्रिको कतारमा गएर सिभिल इन्जिनियरको रुपमा काम गरेको हुँ । त्यहाँ रहँदा त्यहाँको केप इस्ट कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पाएको थिए । म त्यहाँको कामबाट निकै नै प्रभावित भएको छु । त्यहाँ १८ किलोमिटर लम्बाई र ९ किलोमिटर चौडाई भएको औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक करिब ५ लाख देखि ८ लाख मानिसहरुले काम गर्थे । खासगरी इन्धनको प्रशोधन सम्बन्धी काम गर्ने उक्त कम्पनीमा हरेक कामहरु निश्चित पद्धतिको आधारमा नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसैकारण त्यस क्षेत्रमा विकासका कार्यहरु सहज तवरले निरन्तर रुपमा सम्पन्न भइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसरी नै यस्ता कार्यबाट सिकेर सोही बमोजिम अघी बढ्नुपर्छ ।
मुलुकको विकासमा राजनीतिक सुधार आवश्यक छ
म विगत ७ बर्ष देखि नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आएको छु । कतारमा जुन तवरले निर्माण सम्बन्धी काम हुँदै आएको थियो, नेपालमा पनि त्यसै तवरले कसरी काम गर्न सकिने अवस्था सृजना हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा म निरन्तर रुपमा चिन्तनशिल रहँदै आएको छु । तर नेपालमा अहिले सम्म व्यवस्थित तवरले काम हुन सक्ने अवस्थासृजना हुन सकेको छैन । नेपालमा अहिले सम्म पनि मुलुक व्यवस्थित रुपमा अघी बढ्न नसक्नुमा नेपालको राजनीति नै मुख्य समस्याको रुपमा रहँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा पनि हामी व्यवसायीहरुलाई स्वतस्फूर्त रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्न नसकेको कारण हामी निकै नै कठिन परिस्थितिको वावजुद यस व्यवसायमा रहेर काम गरिरहेका छौं ।
राज्य पक्षले विचार गर्नुपर्ने कार्य
नेपालमा कुनै पनि आयोजना अघी बढाउनुपूर्व उक्त आयोजना पूर्ण रुपमा ठीक छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राम्रो तवरले अध्ययन गरेर सोही बमोजिम नै काम अघी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उक्त आयोजना अघी बढाउने क्रममा त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट तथा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा राम्रो तवरले अध्ययन गर्न सकेको खण्डमा मात्र हामीले उक्त आयोजना राम्रो तवरले सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा टेण्डर जुन अवस्थामा निकालिन्छ, त्यस समयमा कुनै पनि अध्ययन भएको हुँदैन, जसले गर्दा अन्य काम अघी बढाउन निकै नै समस्या पर्ने गर्छ । साथै नेपालमा काम गर्ने क्रममा हामीले लामो समय सम्म भुक्तानी पाउने अवस्था पनि छैन । अहिले नेपालमा आर्थिक बर्ष शुरु हुने समयमा नै निर्माण कार्य अघी बढाउन सकिने अवस्था छैन । समयमा रकम विनियोजन नहुने र राम्रो तवरले काम गर्न सकिने वातावरण समेत नभएको कारण नेपालमा यस क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने क्रममा निकै नै समस्या खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।
व्यवसायी आफैंले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ
म नेपालमा खासगरी पुलहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु, तर हामीले कुनै आयोजनाको काम अघी बढाउने क्रममा राज्यबाट समयमा रकम विनियोजन हुने अवस्था नरहेको कारण नेपालमा काम हामीले आफ्नै लगानीमा नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय असार मसान्तको समयमा हामीले भुक्तानी पाएका भएपनि त्यस पश्चात् हालसम्म कुनै पनि योजनाको कार्य सम्पन्न गरे बापत भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं ।
जति पनि भइरहेका निर्माण कार्यमा हामी आफैंले खर्च जुटाएर नर्माणको काम गरिरहेका छौं । सम्झौतागरी सकेपछि पाउनुपर्ने पेश्की रकम समेत नपाई आफनै लगानीमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति छ । बजेटको व्यवस्था भएका आयोजनामा पनि पटक–पटक भुक्तानीको लागि ताकेता गरिएको भएपनि हामीलाई विभिन्न समस्या देखाएर उक्त भुक्तानी रोक्ने काम हुँदै आएको छ । नेपालमा अहिले अधिकांश कामहरुमा यस्ता समस्याहरु हामीले भोग्दै आएका छौं ।
निर्माण क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक
मैले नेपालमा रहेर काम गर्ने क्रममा निर्माण कार्य स्थलमा कामदार तथा कर्मचारीहरुमा पनि आफू उक्त क्षेत्रमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ ? कस्ता सचेतनाका उपायहरु अपनाउनुपर्छ ? भन्ने सम्बन्धमा न्यूनतम सचेतना समेत अपनाएको पाईंदैन । नेपालमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले सुरक्षाको निम्ति क्याप हेल्मेट, ज्याकेट लगायत उपयोग गर्नुपर्ने बारेमा सचेत बन्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति शुरुमा नै सचेतनामूलक कार्यहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । नेपाल सरकारले उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सचेतनामूलक तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र टेन्डर प्रक्रियामा नै यथेस्ट सुरक्षा तथा सुरक्षित कार्यको बारेमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको द्वन्द्वः विकासको ठूलो बाधा
नेपालमा जुन किसिमको द्वन्द्वात्मक वातावरण बन्यो । यसले नेपालको विकासको निम्ति निकै ठूलो बाधक तत्वको रुपमा काम ग¥यो । अहिले जति सङ्ख्यामा नेपालीहरु कामको निम्ति विदेशिएका छन्, शायद नेपालमा द्वन्द्व नभएको भए यत्ति धेरै युवाहरु विदेशिँदैनथिए होला । वास्तवमा नेपाल निकै नै राम्रो सम्भावना भएका देश हो । वास्तवमा हामीले जनआन्दोलन र द्वन्द्व मार्फत मुलुकमा निकै ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्यो ।
नेपालमा रहँदाको अनुभव ः
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा म खासगरी पुलहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु । शुरुमा नेपालमा आफैंले कम्पनी सञ्चालन गर्ने क्रममा निकै कम लागतमा नै काम अघी बढाएको हुँ । यद्यपि नेपालमा केही कामहरु आफैंले जिम्मेवारी लिएर अघी बढाउन सक्ने अवसर देखेसँगै अहिले म आफैंले ४ बर्ष देखि कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छु ।
म नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा रहेर आफैंले पनि धेरै कुराहरु सिक्ने मौका पाएको छु । नेपालमा म यस क्षेत्रमा रहने क्रममा आफूले पैसा कमाउने बारे मात्र सोचेको छैन, नेपालमा रहेर सामाजिक दायित्व समेत कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने बारे समेत मैले निरन्तर सोच्दै आएको छु । मुलुकको विकासको निम्ति हामीले पनि महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा म सतर्क समेत छु । वास्तवमा आफूले सिकेका सीप, प्रविधि तथा अनुभवहरु मार्फत युवाहरुलाई जागरुक गराउने र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने काममा म निरन्तर रुपमा लागि नै रहेको छु, लागि नै रहनेछु ।
अन्त्यमा हामीले यस क्षेत्र मार्फत भोग्दै आउनुभएका समस्याहरुलाई राज्यले जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सकोस् भन्ने मान्यता सहित निर्माण कार्य पूरा गर्ने कार्यमा राज्य तथा व्यवसायी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट उत्तरदायी बन्न सकुन् । यसो हुनसके मात्र यो क्षेत्र अझ व्यवस्थित बन्न सक्छ ।